Hogaamiye hore Al-shabaab ka soo goostay oo u sharaxan Koonfur Galbeed! – Hornafrik Media Network
Hogaamiye hore Al-shabaab ka soo goostay oo u sharaxan Koonfur Galbeed!
HornAfrik-Waxaa maalmaha soo socda Muqdisho dib ugu soo laabananay kadib markii uu aaday gudashada waajibaadka xajka Shiikh Muqtaar Roobow Cali Abuu Mansuur oo muddo sanad laga jogo kahor ku soo biiray dhanka dowladda Soomaaliya.
Shiikh Muqtaar ayaa marka uu soo gaaro Muqdisho waxaa uu ku dhawaqayaa inuu yahay musharax u tagaan xilka madaxtinomo ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya.
Warar uu HonAfrik helay ayaa sheegaya in Shiikha mudooyinkii u danbeeyay uu waday ole-ole uu ugu jiro sidii uu ugu guulesyan lahaa kuursiga uu hataan Sharfiif xasan Shikh Adan ku fahdiyo ee Koonfur Galbeed , waxaa uu safari ku tagay qaar kamdi ah dalalka Caalamka, waxaa uu kulamo la qaatay xubno kamid ah u qeybsanayasha beesha caalamka ee arimaha Soomaaliya.
Dalalka Jabuuti , Kenya iyo Turkiga ayuu mudooyinkii u danbeeyay Shiikh Muqtaar ku tagay safari uu kula kulmay dadka daneeya arimaha Soomaaliya , halka sacuudiga uu labo jeer u kala tagay Cimor iyo xaj tan iyo markii uu ku soo biiray dhanka dowladda Soomaaliya inkastoo sidoo kale mla shegayo inuu Sacduugina ku galahy kulamo siyaasadeed.
Roobow ayaa lagu waramayaa inuu taageero ka heysto dowladda Soomaaliya iyo sidoo kale Mareykanka waxaana la shegaya in xilkaasi aad loola doonayo si loo wiiqo awooda Al-shabaab ee deegaanada Koonfur Galbeed.
Waxaase sidoo kale jirta in loolan adag uu la geli doono siyaasiga galaangalka badan ee haatan kusrisgaas ku fadhiya Shariif Xsan Shiikh Aadan oo isna aan yareysan galaagalka siyaasaded ee uu ku dhex leeyahay madaxda dowladda Soomaaliya sida la sheego.
Muqdisho:-Ciidamada Ammaanka oo heegan la geliyay iyo digniino.
Cabdi Cumar iyo Mas’uuliyiin lala xiray oo Maxkamad kasoo muuqday (Warbixin)